Ireo Tsy Manantsinin’ny Panama Papers (Taratasin’i Panama) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2016 7:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, bahasa Indonesia, Français, русский, 繁體中文, 简体中文, Español
Tamin'ny 1 Aprily 2016, nisy andianà famoahana fantatra tamin'ny hoe The Panama Papers (Taratasin'i Panama) naseho masoandro ho hita tany amin'ny faritra maro nanerana ny tany. Betsaka ny anarana, betsaka ny mpahay lalàna, ary ambonin'izany rehetra izany, betsaka ny fanontaniana. Tao Costa Rica, teny ampela-tanan'i Amelia Rueda sy ny ekipany ao amin'ny vohikalam-baovaon'ny Anjerimanontolon'i Costa Rica, Databasear.com sy Semanario Universidad, ny fanadihadiana ifotony nataon'ny mpanao gazety tao anatin'ireo Taratasy.
Inona avy ireo Taratasin'i Panama? Lahatsary iray avy amin'i Amelia Rueda no manazava azy rehetra #ourvoice
Ny fanontaniana saropady avoitran'ireo Taratasin'i Panama dia misy ifandraisany amin'ny antony namoronana kaonty na orinasa ivelan'ny firenena. Miovaova ny valiny, saingy fanazavana iray anisan'ireo tena iraisan'ny maro ny hoe fomba ampiasaina io handosirana ny fandoavana hetra. Mitombo ny vesatry ny hetra aloa any amin'ny firenena sasany: tohizan'ireo governemanta, tsy dia manana afitsoka loatra amin'ny ara-toekarena, ny fampitomboana ny karazana hetra izay miantraika amin'ny fitahirizana vola any amin'ny banky ary, amin'ny lafiny iray, manasazy ireo izay manana vola betsaka mipetraka any. Avy eo, misy ireo olona izay misafidy fotsiny izao tsy hampihena ny harenany amin'ny fanarahana ny fitakiana hetra atao ao amin'ny fireneny. Mba ho “fiarovana” ny haren'izy ireo, tadiavin'ny olona tahaka izany izay firenena manana rafitra malalaka kokoa amin'ny resaka hetra ka tsy hisy fangiazana ny fanànany ary tsy itakiana hetra ambony be amin'izy ireo mifanaraka amin'ny vola tahiriny. Antony iray hafa ny tsy fahamarinan-toeran'ny politika izay lazaina matetika: raha tsy marintoerana ara-politika ny firenena iray, dia ho voasarika hisintona ny volany tsy hipetraka amin'ireo banky eo an-toerana ny olona.
Anatin'ny ampahany amin'ny fandrakofan'ireo Taratasin'i Panama ao Costa Rica sy manerana ny tany, lohateny vaventy toy ny hoe “Mianara ny fomba ataon'ny mpanambola handosirana ny hetra” no manasongadina ho anaty sokajy iray ireo mpanankarena, fa tsy ireo rehetra mpanefoefo kosa no mpandositra hetra. Omen'ireo taratasy ihany koa ny lisitr'ireo orinasa goavana nanangana orinasa na nanokatra kaonty ofisialy any Panama, na dia natao tamin'ny fomba ara-dalàna aza izany ary tsy nisy mihitsy eritreritra handositra andraikitra tsy handoa hetra. Marobe amin'ireo olona voatanisa ao anatin'ilay vaovao no tsy misy ifandraisany velively amin'ny resaka fandosirana hetra, nefa dia tafiditra ao anivon'ilay rivodoza ny anaran'izy ireo ary dia voatsinkafona sy nofatoran'ireo tambajotra sosialy ho eo amin'ny tsatokan'ny voaheloka.
Cristian Cambronero (@cambronero), mpanao gazety sady bilaogera malaza avy ao Costa Rica, no nanakiana ny famoahana vaovao tahaka izany, tsy nisy fakàna ny hevitr'ireo izay voatohintohina akory. “Tena tsy fomban'olona tomponandraikitra mihitsy ny famoahana anarana na tsiambaratelo tsy nisy fanavahana,” hoy izy nibitsika.
Miombona hevitra amin'i @eduardoulibarr1 aho, tena tsy fomban'olona tomponandraikitra mihitsy ny famoahana anarana na tsiambaratelo tsy nisy fanavahana #PanamaPapers
Tena azo takarina tsara ny faniriana miely patrana momba ny hisian'ny mangarahara manodidina ny olan'ny fandosirana hetra. Kanefa, mipoitra ny fanontaniana raha misy olona tsy manantsiny voatohintohina vokatr'io dingana natao io. Niharan'ny fanenjehana tsy rariny ve ny anarana tsàran'ireo mpahay lalàna sy ireo olona manaraka tsara ny fitsipiky ny mpandraharaha? Tsy maintsy mitandrina fatratra ary tomponandraikitra amin'ny nataony ireo mpanao gazety lohalaharana tamin'ny fitaterana ireny ampamoaka ireny: tokony hitandrina fatratra ry zareo manamarina ny loharanony rehetra alohan'ny hamoahana anaran'olona eo amin'io toerana io izay mandrakizay no hahaveloman'ilay vaovao. Araka izay anohanan'i Mari Carmen (@marcar71) azy, ny fanadihadiana matotra ho avy no hany hamoaka ireo izay tena meloka marina tokoa ho nanao heloka bevava.
Ny zavadehibe momba ireo #PanamaPapers ireo dia ny fanadihadiana hoavy izay hamaritra ny hoe iza no nanao heloka bevava ary iza no tsy nanao.
Matoandahatsoratra iray tao amin'ny gazety La Nación no nanakiana ny Semanario Universidad tamin'ny tsy nanivànany ilay vaovao, ary noho ny namoahany ireo angondrakitra tamin'ny fomba izay toa manosoka hevitra hoe meloka daholo ireo olona rehetra voatanisa ao.
“Ity rakitra sarobidin'ny vaovao ity,” hoy ny nosoratan'ny La Nación, “eo ampela-tanan'ireo tena mendrika hihazona azy, no mety hahafahana hanaisotra ny voalin'ireo hetsika tsy ara-dalàna rehetra, ho an'ny tombontsoan'ny be sy ny maro. Fa tsy nanisy fanavahana ny Semanario, ary etsy ankilan'ireo tranga izay efa mazava tsara fa tsy ara-dalàna, dia nisy ireo anarana maro sy orinasa, mahatonga fisalasalàna amin'izy rehetra ireo.”
Taorian'ny namoahana io vaovao io, nivoaka tamin'ny fahanginany niaro ny tenany ireo olona ambony sasany ao Costa Rica ary nandà ireny fiampangàna ireny, niaraka tamin'ny fanazavàna ny antony nahitàna ny anaran'izay ireo nivoaka tany anatin'ireo tatitra sasany. Isan'izy ireny i María Luisa Avila, Minisitra fahiny nisahana ny Fahasalamana, ary i Leonel Baruch, Minisitra fahiny nisahana ny Fitantanambola.
Nolavin'i María Luisa Avila (@maluavi) ny hoe fanànany vola miafiafina any ambadika any ao Panama. “Tsy voakasik'izany ny orinasa miasa miaraka amiko,” hoy ny bitsika nalefany tamin'ny 4 Aprily.
#Live @Maluavi: “Tsy manana vola aty #Panama aho. Tsy voakasik'izany ny orinasa miasa miaraka amiko”
Leonel Baruch, izay filohan'ny trano famoahana vaovao CRHoy.com, dia namoaka ihany koa fanambaràna an-gazety nitaky ny hanoratan'ny Semanario Universidad fialantsiny imasom-bahoaka hanazavana ny antony marina nahitàna ny anarany mivoaka ao anatin'ireo antontan-taratasy tafaporitsaka. “Voatonona ny anarako,” hoy i Baruch nanoratra tao anatin'ilay fanambaràna an-gazety avy aminy, “satria aho nanao sonia ny famarotana orinasa iray niharan'ilay fanadihadiana, sonia nataoko fony aho Minisitry ny Fitantanambola.”
Olona malaza erantany isankarazany koa no nivoaka nitondra fanazavàna momba ny toerana misy azy ireo, iray amin'ireo kintan'ny baolina kitra diso fantatra loatra i Lionel Messi, izay nolazain'ny fianakaviany fa ilay orinasa voatanisa ao anatin'ireo Taratasy dia ampahany amin'ny “rafitra iray napetrak'ilay mpanolotsaina ara-bola an'i Messi fahiny, efa manaraka ny fenitra ny resaka hetra mahakasika izany,” ary efa tsy miasa intsony ankehitriny.
Hamafisin'ireo ohatra ireo ny anjara toerana goavana raisin'ny mpanao gazety amin'ny fanefena ny sain'ny vahoaka, raha tsy horesahana ny tantara. Ato anatin'ny volana maro hoavy dia azo antoka ny mbola hisian'ny vaovao hiporitsaka. Ny sasany amin'izany dia mety ho azo ekena amin'ny tombamaso ihany; ny sasany hilàna fanaovana fanadihadiana. Tokony ho avy ary hanazava ny antony mampifamatotra ny anaran'izy ireo amin'ilay famoahana vaovao ireny olona voatohintohina ireny. Raha tena tsy manantsiny tanteraka tokoa ry zareo, dia ny fotoana sy ireo manampahefana isaky ny firenena tsirairay no hamoaka azy hoe tena izay tokoa. Ho an'ny maro amin'ireo tsy manantsiny, anefa, toa tsy ho afaka ny hanadio ny anarany eny an-kianjan'ny hevi-bahoaka akory ry zareo, ary eo no mitoetra ny olana.